ပြည်သူတွေ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျနေရတဲ့ ရွှေညဝါဆရာတော် ဆွမ်းခံပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြည်သူတွေ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျနေရတဲ့ ရွှေညဝါဆရာတော် ဆွမ်းခံပွဲ
ပြည်သူတွေ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျနေရတဲ့ ရွှေညဝါဆရာတော် ဆွမ်းခံပွဲ
Posted by ပိုင်လေး on Feb 17, 2012 in Copy/Paste | 28 comments
ဒီလို သွားလာနေရတဲ့ အခြေအနေမှာတောင် ဆရာတော်ကြီးဆီ မရောက်ရောက်အောင် သွားခဲ့တာပါ..
ဆရာတော်ကြီးကို လာရောက် ဦးတင်လှူဒါန်းတဲ့ အမေအို
၁၆ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကြီး ဒကာ၊ ဒကာမတွေကို နှုတ်ဆက်တဲ့ အနေနဲ့ ဆွမ်းခံကြွချီချိန်မှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ကျမျက်ရည်တွေပါ…။ ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးသည် အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသော ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်ပါသည်..။ `ဤစကားသည် မှန်ပါသည် ဤမှန်သော သစ္စာစကားကြောင့် အဓမ္မဝါဒီများ ကျဆုံးပါစေ..
ကိုယ့်တစ်ကယ် မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျခဲ့ပါသည်..ဤစကားသည် မှန်ပါသည် ဤမှန်သော သစ္စာစကားကြောင့် အဓမ္မဝါဒီများ ကျဆုံးပါစေ..
You go to this youtuble…………
အများအကျိုး ဆောင်ရွက်တဲ့သူကို ……..
probability = ~ 1 ဖြစ်လေလေပါပဲ
အီးမေးထဲမှာတော့ တရားပွဲ ပိတ်တာ ရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာချက် စာ၂ရွက် မိတ္တူ ရောက်နေတယ်။
ရွှေညဝါဆရာ ​တော် ဘဒ္ဒန္တ ဦး​ပညာသီဟဟာ လာမယ့်​ ၁၉ ရက်​နေ့​ကျရင် လက်ရှိ သီတင်း​သုံး​နေထိုင်တဲ့​ ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီး​ ကြည့်​မြင်တိုင်မြို့​နယ်တွင်း​က သာဓု ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က​နေ ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီး​ ​မှော်ဘီမြို့​နယ်က ခြံတခြံရဲ့​ သစ်ပင်​အောက် သီတင်း​သုံး​မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအ​ကြောင်း​ ကို ဆရာ​တော်က “​မှော်ဘီကို ကျုပ် ဒကာ၊​ ဒကာမ​တွေက လှူထား​တဲ့​ခြံရှိတယ်။ ​လော​လောဆယ် ​ကျောင်း​လည်း​ မ​ဆောက်ရ​သေး​ဘူး​။ ​ဆောက်ဖို့​လည်း​ မရှိ​သေး​ဘူး​။ အဲဒါအတွက် သစ်ပင်​အောက်မှာပဲ ​နေမယ် ​လော​လောဆယ်” လို့​ မိန့်​ပါတယ်။
ဒီပြုကျင့်​ မှုဟာ ဘုရား​ဟောအတိုင်း​ဖြစ်ပြီး​ ​ကျောင်း​ရှိရင်ရှိ၊​ မရှိရင် သစ်တပင်​အောက်မှာ ​နေရမယ်လို့​ ဘုရား​ဟောအတိုင်း​ ကျင့်​ကြံတာပါလို့​ ဆရာ​တော်က မိန့်​ပါတယ်။
ဆရာ​တော်ကို ​ကျောင်း​တိုက်က​နေ ထွက်ခွာ​ပေး​ဖို့​ နိုင်ငံ​တော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့​ရဲ့​ ဆုံး​ဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာတဲ့​အ​နေနဲ့​ ထွက်ခွာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ​တော် သွား​ရောက်သီတင်း​သုံး​ဖို့​ စီစဉ်ထား​တဲ့​ခြံဟာ ရန်ကုန်မြို့​ အထွက်က သဲအင်း​ဂူ ဝိပသာနာရိပ်သာ ​ကျောင်း​တိုက်ကြီး​ဆိုတဲ့​ ဆိုင်း​ဘုတ် ​ရောက်တဲ့​အခါ အဲဒီဆိုင်း​ဘုတ်​အောက်က​နေ ၄ မိနစ်ခန့်​ ကား​မောင်း​ဝင်ရပြီး​ ၄ ဧကခွဲခန့်​ ကျယ်ဝန်း​တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
ဆရာ​တော် ​နေရာသစ်ကို ကြွသွား​တဲ့​အခါ ​ကျောင်း​တိုက်မှာ လက်ရှိ ပညာသင်ကြား​နေတဲ့​ ဦး​ဇင်း​၊​ ကိုရင်၊​ ​ကျောင်း​သား​ စုစု​ပေါင်း​ ၁၀၀ ​ကျော်ကို တပါတည်း​ ​ခေါ်​ဆောင်သွား​မှာလို့​ မိန့်​ပါတယ်။
“အကုန်လုံး​ ကျုပ်​ခေါ်သွား​မှာ။ ဟ မလိုက်လို့​ သူတို့​က စာသင်သား​ ဘယ်မှာ ​နေရမှာတုန်း​။ တပါး​တည်း​ ကြွခိုင်း​ပေမယ့်​ ကျုပ်ကို မှီခို​နေတဲ့​သံဃာ​တွေ ရှိတယ်။ သူတို့​အတွက်လည်း​ ​နေစရာထိုင်စရာ ကျုပ်မှာကလည်း​ အခက်အခဲ ရှိ​နေတယ်။ တရုတ်နည်း​ပညာနဲ့​ ကျုပ်တို့​နိုင်ငံထဲမှာ အ​ဆောက်အဦကို ချက်ချင်း​ဆောက် ချက်ချင်း​နေလို့​ရတဲ့​ နည်း​ပညာ​တွေ ရှိပြီ​လေ။ ပိုက်ဆံ​ပေး​ပြီး​ လုပ်ခိုင်း​မှာ​ပေါ့​။”
နိုင်ငံ​တော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့​က ဆရာ​တော်ကို မနှစ် ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ လဆန်း​ပိုင်း​မှာ တရား​ဟောခွင့်​ တနှစ်ပိတ်ပင်ခဲ့​ပါတယ်။ အဲဒီ​နောက် တနှစ်မပြည့်​ခင်မှာ စည်း​ကမ်း​ချိုး​ဖောက်တယ်ဆိုပြီး​ ​ကျောင်း​တိုက်က​နေ ဒီလ ၁၉ ရက်​နေ့​မှာ ထွက်ခွာဖို့​ နိုင်ငံ​တော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့​က ဆုံး​ဖြတ်ခဲ့​ပါတယ်။
ဒီလဆန်း​မှာ​တော့​ တနှစ်ပိတ်တာပြည့်​ပြီ ဖြစ်​ပေမယ့်​ ​နောက်တနှစ်​ဟောခွင့်​ ပိတ်ခဲ့​ပါတယ်။
ဟယ်… ဖတ်ရတာ တကယ် စိတ်မကောင်းလိုက်တာ..
သိသလောက်တော့ အရပ်ထဲမှာပြောကြတာက NLD အတွက် တရားပွဲလုပ်ပေးလို့လဲပြောတယ်
ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာကတော့ သူ့တရားထဲမှာ ဗုဒ္ဒတရားနဲ့ ဆန့်ကျင်တာတွေပါတယ်လဲပြောတယ်
ဟိုတစ်လောကလဲ ဆရာတော်မေတ္တာရှင်ရွေပြည်သာ တရားမှားကြောင်း ၀န်ခံကတိ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရသေးတယ်.
ဆရာတော်သည် ပထမတနှစ် တရားပွဲ ပိတ်ပင်ခံနေရစဉ် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အတွင်း မန္တလေးတိုင်း NLD ရုံးတွင် တရားဟောသည်ဟု စွပ်စွဲကာ သံဃာ့ဆိုဆုံးမှုမကို မနာခံသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီး ကြည့်မြင်တိုင်ရှိ သာဓု ပရိယတ္တိ ကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားရန်နှင့် ကျောင်းတိုက်တွင်း မည်သည့် သင်တန်းမှ မပြုလုပ်ရန်လည်း မဟနမှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က စာပေးပို့ ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် ဆရာတော်သည် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် သာဓုကျောင်းတိုက်အတွင်းမှ ထွက်ခွာပေးရန် လက်မှတ်ထိုးထားရပြီး ‘ဆိုဆုံးမ၍ မရသူ’ဟု သတ်မှတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ “ဝန်ခံကတိ လက်မှတ် လည်း ထိုးခဲ့တယ်။ အဲဒီအတိုင်းအတာအထိ လုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ နောက်ထပ်ဘာများ လုပ်ပေးရဦးမှာလဲ။ နောက်ထပ် ဘာလုပ်ပေးမှ အဲဒီ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းက ပျက်ပြယ်မှာလဲ။ စဉ်းစားလို့မရအောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ” ဟု မဇ္ဈိမကို မိန့်ကြားသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ ရက်နေ့များတွင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်နှင့် ကမာရွတ်မြို့နယ်များရှိ ဒါယိကာ၊ ဒါယကာမများကို နှုတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့် ဆွမ်းခံထွက်မည်ဟုလည်း သိရသည်။
သာဓု ကျောင်းတိုက်မှ ထွက်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာတော်က “၁၉ ရက်နေ့ကျတော့ အချိန်တန်ရင် ကျုပ်ထွက်သွားမှာပါ။ လွမ်းစရာမရှိပါဘူးဗျာ။ လောကကြီးမှာ ပြီးရင် အားလုံးက ထားခဲ့ရမှာပါ” ဟု မဇ္ဈိမကို မိန့်ကြားခဲ့သည်။
တာဝန်ရှိသူတွေက စုံတွဲတွေအတွက် အခန်းမဲဖောက်ပေးတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးပွဲကျတော့ မတားမြစ်မပိတ်ပင်
ဒါတောင်ဖျော်ဖြေပွဲက စာနယ်ဇင်းတွေဝေဖန်လို့ နောက်ဆုတ်သွားတာ အစိုးရကတော့ သိတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူး
အစိုးရက တရားပွဲကျတော့ ပိတ်ပင်တယ် ဆရာတော်တွေနှင်ထုတ်တယ် ကျောင်းတွေချိတ်ပိတ်တယ် တော်တော်ကောင်းတဲ့အကောင်တွေ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်လူမျိုးက ပြန်စော်ကားနေတာ စိတ်လေတယ်
လုပ်သင့်တာကိုကျတော့ မလုပ်ဘဲ မလုပ်သင့်တာတွေကို လုပ်နေကြတယ်နော်
Let us do the best for Buddha Sasana.
၄ ခုမြောက် ပုံမှာ ဆတော်ကြီး တိုက်ဂါး ဘီယာ ဘုန်းပေးနေတယ် …ဟီးဟီးးးးး။
နောက်တာပါ ။ ရေနွေးကြမ်း ကပ်တာကလဲ ကပ်စရာ ခွက်ရှားလို့…… ။
ဆရာတော် နှစ်သက်ရာ ဘုန်းပေးနိုင်ဖို့ နွားနို့၊ ရေနဲ့ အအေး သုံးမျိုးကပ်ထားပုံ ရပါတယ်။ ရှိတဲ့ခွက်လေးနဲ့ ကပ်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေရ့ ဘဝကို နည်းနည်းနားလည်ပေးကြပါ။ ခွက်ကအရေးမကြီးပါ ပညတ်တွေပါ..။ အကောင်းမြင်တဲ့ အမြင်လေးနဲ့ ကြည့်ပေးကြပါ.. ရွှေခွက်နဲ့ပဲ ကပ်ကပ် ကပ်တဲ့သူရဲ့ သဒ္ဓါတရားက အရေးကြီးဆုံးပါ.. ဟန်ဆောင်မှုလား အကျိုးမျှော်လို့ ကပ်နေတာလားဆိုတာ နည်းနည်းဝင်ရောက် ခံစားကြည့်ကြပါ..။
ဒီလို သုရာအမှတ်သားပါတဲ့ခွက်နေနဲ့ လှူဖွယ်ပေးတာကတော့
ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး အရပ် မဟုတ်ပါသဖြင့်
လှူသူတွေဟာ ဆရာတော်ကြီးကို စော်ကားရာတောင်ရောက်ပါတယ်
( သေခြာတွေးပါ )
ပြည်သူတွေရ့ ဘဝကို နည်းနည်းနားလည်ပေးကြပါ။ ခွက်ကအရေးမကြီးပါ သဒ္ဓါတရားက အရေးကြီးဆုံးပါ………
နေရာတစ်ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားစရာသတ္တဝါဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်
ဒီအရပ်မှာ ဒီခွက်လောက်က ရှားလို့လားကွယ်
ဟုတ်တယ် ပွပွရေ ဇတ်နာအောင်တော့ အတင်းမလုပ်နဲ့ပေါ့
ဟယ် ငါကလဲ အနီကတ်ပြခံရတာ အမှတ်မရှိ ၀င် တောပြန်ဘီ
ဗမာ တရုပ် ရေ ။
ငါ့မှာ နီတာ မနီတာက အကြောင်း မဟုတ်ဘူး ။
ဒီလိုပုံကို နိုင်ငံတကာ စာမျက်နှာမှာ ဘာမှ မရေးပဲ တင်ကြည့်လိုက် ။
ဘီယာ သောက်တဲ့ ဘုန်းကြီး ဆိုပြီး မှတ်ချက် မပေးရင် ကြိုက်သလိုပြော ။
မြန်မာပြည်က ဘီယာသောက်တဲ့ ဘုန်းကြီးဆိုပြီးလို့ တောင် လုပ်စားခံသွားရမယ် ။
သဒ္ဓါတရား ကို လက်ခံတယ် ။ ငါတို့ လူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ကို လက်မခံတာ ။
ကျိုးသင့် ကြောင်းသင့် စဉ်းစားမှု မရှိဘူး ။
အဲလောက်ကြီး တဲ့ ဖန်ခွက်နဲ့ကပ်တာထက်စာရင် သုံးဆောင်နိုင်လောက်တဲ့
ပမာဏ ရှိတဲ့ ကပ်တာ ပိုမကောင်းဘူးလား ။
များများကပ်လည်း မသုံးဆောင်နိုင် အကျိုးမရှိဘူး ။ ရေနွေးဆိုတာ ရေကနေ ဖြစ်လာတာ ။
ကိုယ့် အသက်ရှိချိန်မှာ မလိုအပ်ပဲ ဘုန်းဘောလအော သုံးနေရင် ကမ္ဘာကြီးမှာ ရေချို
တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကုန်ဆုံးသွားရင် နောက်မျိုးဆက်တွေ ဘယ်လို ရှင်သန်မလဲဆိုတာ
နောက်တစ်ချက်က ဆတော်ကြီးကို ကပ်တာ အမြင်လှစေချင်တော့ ခွက်ကောင်းနဲ့ 
ကပ်တယ် ။ ကောင်းတော့ ကောင်းပါရဲ့သူရာရည်ခွက်ကြီးနဲ့ကပ်တော့ တင့်တယ်ရဲ့ လား ။
သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ဆိုပဲ စိုဘဲ…….။ သဂျီးရေ ပြောင်းနေတာလား ပြောင်နေဒါလား ပြောပါအုံးဗျို့….။ ဒီမိုး ဒီရေ ဒီလူတွေနဲ့တော့ ဟုတ်နေပါပြီ..။
ကျုပ်တော့ ဓါတ်ပုံကြည့်ရင်း မျက်ရည်ကျမိပါတယ်။
ဘိုးတော်အပေါင်းတို့ အောက်က မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုကို ခံစားသြည့်ကြဘို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဧရာဝတီ ပင်မစာမျက်နှာမှာ မနေ့က ဖော်ပြထားတဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော် ရန်ကုန်မှာ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ သတင်းမှာ စာဖတ်သူများ ပေးထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေထဲက မင်းသူရ ရဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မကြာမီရက်အတွင်းမှာ ရွှေည၀ါဆရာတော် ကျောင်းတိုက်က ထွက်ခွာရပါတော့မယ်။ ဒီအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်ရဲ့ နေရေးထိုင်ရေးအတွက် စိတ်ပူပန်မိသလို မဟနဆရာတော်ကြီးတွေအတွက်လဲ အပြစ်ပြောစရာဖြစ်သွားရတာကို စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ဒီဖြစ်စဉ်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အားနည်းချက် လေးခုလောက် တွေ့ရပါတယ်။
ပထမအချက်ကတော့ ရွှေည၀ါဆရာတော်ရဲ့ အားနည်းချက်ပါ။ ဆရာတော်အနေနဲ့ မဟနဆရာတော်ကြီးတွေ တားမြစ်ထားတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ နောက်ကွယ်က လူတွေက ဆရာတော်ကြီးတွေကို တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ခိုင်းတယ် လို့ ယူဆစရာရှိနေသည့်တိုင်အောင် ဆရာတော်ကြီးတွေအပေါ်မှာ လေးစားသောအားဖြင့် တားမြစ်ချက်ကို တိတိကျကျ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ လိုက်နာမှုမရှိခဲ့တာဟာ ဆရာတော်ဘက်က အားနည်းချက်ပါ။ နောက်ပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေကို အသနားခံစာတင်တဲ့နေရာမှာလဲ တစ်ယောက်ယောက်ကို စာပို့ခိုင်းတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အလှည့်ကျအဖွဲ့ခွဲ ၁၅-ပါးရှိရင် ၁၅-ပါးလုံးထံသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး တောင်းပန်လျှောက်ထားသင့်သလို ရှင်းပြစရာရှိတာတွေကိုလဲ ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။ ဒါတွေ မလုပ်နိုင်ခဲ့တာဟာလဲ ဆရာတော်ရဲ့ အားနည်းချက်ပါ။
ဒုတိယအားနည်းချက်ကတော့-မဟနဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ အားနည်းချက်ပါ။ ရွှေည၀ါဆရာတော်ဟာ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးဖွင့်လှစ်ပြီး သာသနာပြုနေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါး ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ထောက်ထား ငဲ့ညှာသင့်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်မျိုးဟာ တပည့်ပရိသတ်များစွာကို ထိန်းကျောင်းပြီး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်လို့ အလွန်ပင်ပမ်းတဲ့ အလုပ်ပါ။ တော်ရုံစိတ်ထားမျိုးနဲ့ လုပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒီလို အပင်ပမ်းအဆင်းရဲခံပြီး သာသနာပြုနေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးအပေါ်မှာ ငဲ့ညှာသင့်ပါတယ်။ ဟောတဲ့ တရားတွေမှာ ခက်ထန်မာကျောမှုတွေ ရှိနေသည့်တိုင်အောင် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ်ထားတဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ စေတနာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုသင့်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေအနေနဲ့ ရွှေည၀ါဆရာတော်ဘက်က တားမြစ်ချက်ကို မလိုက်နာဘဲ ဆက်ပြီး တရားဟောနေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပည့်ရင်းတစ်ပါးလို သဘောထားပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး ခေါ်ယူဆုံးမသင့်ပါတယ်။ သတိပြုစရာအခြေအနေတွေရှိနေရင်လဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် သတိပေးထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလို မလုပ်ခဲ့ကြတာဟာ ဆရာတော်ကြိးတွေရဲ့ အားနည်းချက်ပါ။
တတိယအားနည်းချက်ကတော့ ရွှေည၀ါဆရာတော်ကို ထောက်ခံအားပေးကြတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့ အားနည်းချက်ပါ။ သူတို့တွေဟာ စေတနာကောင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာကို ချဉ်းကပ်ရာမှာ ချဉ်းကပ်ပုံ မမှန်ပါဘူး။ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေထံကို စာတင်တာတို့၊ သမ္မတထံကို စာတင်တာတို့ဟာ အင်အားပြရာရောက်ပါတယ်။ ကိုယ်လေးစားတာ မလေးစားတာ အပထား၊ တဘက်က ဆရာတော်ကြီးတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်က ကြည့်ရင် မသင့်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စမျိုးကို ဒီနည်းနဲ့ ချဉ်းကပ်တာဟာ မီးကို ရေနဲ့ ငြိမ်းသတ်ရာ မရောက်ဘဲ လောင်စာထပ်ဖြည့်ပေးရာရောက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဘက်က အားနည်းချက်ပါ။
စတုတ္ထအားနည်းချက်ကတော့- ရွှေည၀ါနဲ့ မဟန ကြားမှာ ၀င်ရောက်ဖြန်ဖြေပြီး အကောင်းဆုံးအဖြေထွက်အောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ့် နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးတစ်လေမှ ပေါ်ထွက်မလာတာပါ။ သဘောထားကွဲပြားနေတာကို ညှိနှိုင်းစေစပ်ပေးရတာ၊ ကိုယ်စေ့စပ်ပေးလိုက်လို့ ညီညွတ်မှုရသွားကြတာတွေဟာ အလွန်ကို ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကုသိုလ်အလုပ်ပါ။ ဒီကုသိုလ်ကို ယူမယ့်ဆရာတော် တစ်ပါးတစ်လေမှ ပေါ်မလာတာဟာ ကံခေခြင်းပဲလို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီအားနည်းချက်တွေကို ဒီအချိန်မှာ မပြောချင်ပါဘူး။ နောက်နောင် ကိစ္စရပ်တိုင်းမှာ တတ်နိုင်သမျှ အားသာချက်တွေ ပေါ်ထွက်လာအောင် သတိပြုမိဖို့ ပြောလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေည၀ါဆရာတော်လဲ နေရာသစ်မှာ သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကို ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာစွာနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
သတ္တဝါမှာ မာန်မာနဆိုတာ တော်တော်ကြောက်ဘို့ကောင်းတယ်နော
ခင်ဗျားတို့သေခြာသတိထားတတ်ရင် မာနတရားတွေကို တွေ့မှာပါ
တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဌိ ဤမည်သော အကြောင်းသုံးပါးသည် သတ္တဝါ၏ပျက်ဆီးခြင်းဖြစ်၏ ဟု
ဟောကြားတော်မူ အပ်သော ထို မြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုးပါ၏။
ဘီယာခွက်နဲ့ ရေနွေးကပ်တာလဲ ပြောစရာဖြစ်တာပေါ့
လူတွေက… တဦးချင်းစီက.. ကြယ်ငါးတွေပစ်ပေးဖို့..အင်မတန်လိုနေတာပါ…။
ကွန်ဆာဗေးတစ်အစွန်းရောက်.. ညာစွန်းကျွံနေသူတွေ.. စိတ်ဓါတ်ရေးရာပြင်ကြရလိမ့်မယ်…။
နွားကွဲရင်ကျားဆွဲမယ် လို့ပြောချင်တာမလား တဂျီးရဲ့ ပြောလိုက်စမ်းဘာ…
နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး မဟန ရယ်။နည်းနည်းမဟုတ် အများကြီးနားမလည်နိုင်တာပါ။
သူ့ဖာသာ တောထဲသွား ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်ကိုချဉ်းကပ်ပြီး တရားအားထုတ်